thahlaoo: November 2007
(ဖ) ပါရင် ဖရဲသီးတောင်မစားနဲ့
Posted by thahlaoo at 1:32 AM No comments: Read Comments
အိမ်ပေါ်ထက်က နှင်ချရေလဲ --။
ဈီးကိုပြီးလီ ညီညွတ်ရေး --။
Posted by thahlaoo at 1:34 AM No comments: Read Comments
(၅) ပြောလို့ပြကေ၊ ထိုမှတဖန်၊ တောင်ရပ်ထံသို့၊ ဝါးပြန်ခြောက်ရာ၊ လှမ်းသောခါတွင်၊ ငါးရာအိမ်ခြီ၊ ရိပ်ဝီဝီနှင့်၊ နီလည်းမထိုး၊ ပန်းသစ်ပင်ရို့၊ ရွာတွင်မိုးလို့၊ ကျော်ဟိုးလူခွင်၊ ရတနာနှင့်၊ ဥစ္စာပေါကေ၊ ပန်းတောပြင်ကို၊ အယင်အမြန်၊ ရောက်လတ်ပြန်သော်၊ တဖန်ထိုမှ၊ ဒက္ခိဏသို့၊ မျှော်ကာလှည့်လျှင်၊ ကြည့်လတ်ကကေ၊ မြမြမို့မို့၊ စိမ်းစို့စို့နှင့်၊ မှိုင်းညို့မှုံပြာ၊ ရွာတရွာကို၊ မြင်ပါလိမ့်မည်၊ ထိုသည်ရွာ၏၊ မည်နာမကို၊ သိရပေအောင်၊ နှမပြောကြား၊ မှတ်သားရန်ကေ၊ ညွှန်စကားကို၊ ထောင်နားလည်းနာ၊ ဤသည်ရွာတွင်၊ ရှည်ကြာမြင့်လစ်၊ စည်ပင်ရွာကေ၊ ဝေသာခေတ်က၊ ပြေပြစ်လှစွာ၊ ပိသုကာရို့၊ ကောင်းစွာထုလုပ်၊ လက်ရာမွန်၍၊ လွန်ချောညက်ကေ၊ ကျားနက်ရုပ်ကို၊ ရွက်အုပ်ညိုမှောင်၊ မြပြိုင်ညောင်နှင့်၊ ကံဘောင်ထက်မှာ၊ ဝတ်လျှက်အမှန်၊ လွဲမဖယ်ဘဲ၊ မြဲတည်ဘိကေ၊ ဟိခြင်းဟန်ကြောင့်၊ ရီကန်ကျားနက်၊ ပေါင်းစပ်ပြန်၍၊ နံနှစ်ချက်ကို၊ တွဲဖက်ပြီးခါ၊ ယင်းရပ်ရွာကို၊ သညာနာမ၊ ကျားနက်ကန်လေ၊ တွင်ပြန်ရဟု၊ မောင်လှကောင်းစွာ၊ မှတ်ပြီးခါဝယ်၊ ပြုပ္ပါစူးစူး၊ လှိုင်းကြက်ခုန်ကေ၊ ယမုန်မြစ်ကို၊ စစ်စစ်ကူးလျှင်၊ ကြည်နူးစမ္ပါယ်၊ လွန်သပ္ပါယ်၍၊ တင့်တယ်ယောက်ပတ်၊ ခြောက်ရောင်ညီးကေ၊ စေတီမြတ်ကို၊ မြင်လတ်လိမ့်မည်၊ သမိုင်းမှန်နှင့်၊ တည်ဟန်များကို၊ ပြောကြားမည်ကား၊ လွန်သည်ရှိက၊ လောင်းကြက်မည်ကေ၊ ရွှေပြည်မတွင်၊ ဗလပညာ၊ ဘုန်းအာဏာနှင့်၊ ရာဇာမင်းထီး၊ နန်းရိပ်ခိုကေ၊ ထိုမင်းကြီးမှာ၊ သတ္တိပြည့်စုံ၊ ရဲစွမ်းဂုဏ်နှင့်၊ ကိုယ်ယုံမတ်လှ၊ အရာရာတွင်၊ လိမ္မာသိကေ၊ ဝိမလလျှင်၊ မိစ္ဆဌာနေ၊ သက်တိုင်းပြည်က၊ ပြန်သည်ကာလ၊ စေတီရာတွင်၊ ဗိုလ်တာဝန်းကေ၊ စခန်းချလို့၊ ခတ္တဒီဝါ၊ နားပြီးခါလျှင်၊ အောင်ချာကနက်၊ ရွှေနန်းဘုံဖြင့်၊ ဂုဏ်မချို့ကေ၊ မြို့လောင်းကြက်သို့၊ ချီတက်ပြီးခါ၊ များမကြာပင်၊ ပြန်လာတုံလတ်၊ အုတ်ချပ်စီကေ၊ စေတီမြတ်ကို၊ ယောက်ပတ်တင့်တယ်၊ တည်ထားပေ၍၊ မြင့်ရှည်လွန်ညောင်း၊ အလီလီကေ၊ ရာသီပြောင်းလို့၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ကြာသောခါတွင်၊ သေနာပဓိ၊ ရဲစွန်းဂုဏ်ဖြင့်၊ ပြည့်စုံလတ်ကေ၊ မတ်ကဝိနှင့်၊ မင်းထီးဘုရင်၊ နတ်နန်းဝင်သော်၊ တဆယ်ကျော်၍၊ စွန်းပေါ်ခုနစ်၊ မင်းစောမွန်လျှင်၊ နန်းစံခေတ်တွင်၊ သက္ကရာဇ်ကောဇာ၊ ခုနစ်ရာနှင့်၊ စွန်းလာခြောက်ဆယ်၊ သျှစ်ခုဝယ်တွင် နှိပ်စက်များစွာ၊ သို့တွက်တာကြောင့်၊ ပြည်ရွာပျက်စီး၊ (-----)၊ အိုးအိမ်ခွာ၍၊ ထွက်ခွါပြီးသော်၊ ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်၊ ရွှေရခိုင်မှာ၊ အိမ်တိုင်နွယ်ရစ်၊ မြက်သစ်အုံ၍၊ ရှက်ခြုံနှောကေ၊ လယ်တောဖြစ်လို့၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ ကာလရှည်အောင်၊ ကြာပေသောခါ၊ မစ္ဆိမာက၊ ရာဇဘုန်းသန်၊ သူရတန်လျှင်၊ ထောက်ကန်ပြီးငြား၊ သောင်းထိဝီအောင်၊ ဗိုလ်ခြီများနှင့်၊ မင်းသားစောမွန်၊ ပြည်တော်ပြန်၍၊ ရန်ကိုနှိမ်ပြီး၊ လောင်းကြက်ခေါ်ကေ၊ မြို့တော်ကြီးမှာ၊ နန်းထီးထပ်မံ၊ စိုးမိုးစံလျှင်၊ နိုင်ငံအဝှမ်း၊ ရီနှင့်ကြာကေ၊ ပမာညွှန်းသို့၊ အီးချမ်းသာယာ၊ ဟိလတ်ခါတွင်၊ ပြန်လာမစဲ၊ ကိုယ့်ရပ်နယ်လေ၊ ရွာပြည်ထဲမှာ၊ စုစည်းဝိုင်းအုံ၊ သစ်နွယ်ခြုံကို၊ အကုန်ယှင်းမြောက်၊ ညီအညာဖြင့်၊ အိမ်ယာဆောက်လို့၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ၊ များလူသျှင်မှာ၊ သာရွှင်ပျလို့၊ ပြန်ကြခါဝယ်၊ မည်သာလွှမ်းကျော်၊ တောင်ဦးမော်ဟု၊ တွင်ခေါ်တုံငြား၊ များပြားစွာကေ၊ ထိုရွာသားမှာ၊ ပေါက်ဖွားဇာတိ၊ မိမိရွာကို၊ စွန့်ခွာဘိ၍၊ ဘုန်းဟိထင်ပေါ်၊ စေတီတော်နှင့်၊ တခေါ်လောက်ဝယ်၊ တူမကွာဘဲ၊ စုလာလတ်ကေ၊ ရွာရပ်တည်လို့၊ အမည်နာမ၊ မြတ်စေတီကို၊ မှီသဟဲကေ၊ စွဲပြီးမှလျှင်၊ များလှလူသျှင်၊ စေတီပြင်ဟု၊ ခေါ်တွင်မညီး၊ ဓညမည်ကေ၊ ပြည်တော်ဝှမ်းမှာ၊ ပန်းသို့မွှီးလို့၊ ရပ်ကြီးသာယာ၊ ဤသည်ရွာလည်း၊ ဓညာနိဂုဏ်း၊ ပတ်ဝိုင်းကျင်ကေ၊ ဆင်ခြီဖုန်းဟု၊ ရွှေဘုန်းသက်ဝီ၊ မြဲမကွာဘဲ၊ စွဲကာထားကေ၊ မှတ်သားလီလေး။
Posted by thahlaoo at 4:29 AM No comments: Read Comments
(၄) ရောက်လတ်ပြန်ကေ၊ ပျော်ရန်ကောင်းခြင်း၊ လောကဓံမှာ၊ ပြိုင်စံကင်းအောင်၊ သန့်ယှင်းသာယာ၊ ဒေါင်းဒေါင်ရွာကို၊ လှည့်ကာပတ်ဝန်း၊ ကြည့်ပြီးကေလျှင်၊ ရွာလယ်လမ်းက၊ ဖြောင့်တန်းမှန်စွာ၊ တောင်ဒိသာသို့၊ လှမ်းလာပြန်က၊ ဥဿပကေ၊ နွားလှနှစ်ထွန်၊ ခရီးစွန်တွင်၊ ဝင်းခြံပြိုင်းပြိုင်း၊ တဆိုင်းဆိုင်းနှင့်၊ တံတိုင်းပမာ၊ ရံဝိုင်းကာ၍၊ များစွာအိမ်ခြီ၊ ပြည့်ဝှန်းစီကေ၊ ဆန်ရီစပါး၊ ဝတ်အထည်ကေ၊ ရွှေငွေများနှင့်၊ ကျော်ကြားလူ့ခွင်၊ လွန်စည်ပင်၍၊ လိုအင်ပြည့်ငြား၊ ကြီးငယ်ဟူကေ၊ လူအများမှာ၊ ရိုးသားဖြောင့်မှန်၊ လုပ်အကြံကို၊ အားသွန်ကြိုးပန်း၊ လုံလသန်၍၊ ဇွဲမာန်ကြွကေ၊ မယော့တန်းဖြင့်၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာ၊ အရာရာတွင်၊ ညီညာစည်းလုံး၊ ကိုယ်ချင်းစာကေ၊ သမ္မာထုံးကို၊ နှလုံးပိုက်ခါ၊ မကောင်းရာကို၊ ပယ်ခါစွန့်ထား၊ ကောင်းစီရန်လေ၊ ညွှန်စကားကို၊ နားထောင်နာယူ၊ တယောက်လူတွင်၊ အပူရောက်က၊ တရွာသူမှာ၊ ဝိုင်းကူကြလို့၊ ဖေးမကယ်တင်၊ လူတိုင်းပင်လျှင်၊ ကြည်လင်နှလုံး၊ ရှိအဟော်က၊ သူတော်ထုံးကြောင့်၊ ရွာလုံးစုံစွာ၊ ရတနာဖြင့်၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝ၊ သာသနာမှာ၊ ရောင်ဝါပလို့၊ ဖက်မျှမမြင်၊ ဖော်သဟာရို့၊ ပျော်ရာကောင်းကေ၊ အဒေါင်းပြင်ဟု၊ သောင်းခွင်ကျော်ညာ၊ ထိုသည်ရွာကို၊ ရောက်ပါလတ်သော်၊ ကုန်းထိပ်ပေါ်တွင်၊ ရောင်တော်ထိန်လျှပ်၊ မွေသရီလေ၊ စေတီမြတ်သို့၊ ချည်းကပ်ပြီးလျှင်၊ လက်နှစ်ပြင်ကို၊ ထိပ်တွင်ချီမိုး၊ ခါသုံးကြိမ်ဖြင့်၊ ဦးနှိမ်ကျိုးလို့၊ ရှိခိုးပြီးခါ၊ ရပ်ပြုပ္ပါသို့၊ ဖြောင့်စွာတန်းတန်း၊ ဝါးပြန်တာဖြင့်၊ သျှစ်ရာခန်းကို၊ ချီလှမ်းတုံပြန်၊ စည်မောင်းညံ၍၊ ပျော်သံမတိတ်၊ လူ့ရပ်ဘုံမှာ၊ ဂုဏ်တံဆိပ်နှင့်၊ ပုဏ္ဏရိပ်ရွာမ၊ ခေါ်တွင်ပေကေ၊ ရပ်ဒေသကို၊ ရောက်ပါလိမ့်မည်၊ ရှိမြောက်ယံကို၊ တဖန်ထပ်လို့၊ ရှုလတ်ချေသော်၊ မသွေခြားကွာ၊ တာငါးရာတွင်၊ လွန်စွာစည်ကား၊ ရောင်းအဝယ်ဖြင့်၊ ကုန်သည်များရို့၊ ကမ်းပါးတခွင်၊ လောင်းစပ်တင်နှင့်၊ လွမ်းကြင်ထောင်ပေါင်း၊ နားခိုပြန်ကေ၊ ကုန်ဝယ်ရောင်းလို့၊ သောင်းသောင်းလည်းဆူ၊ များသျှင်လူရို့၊ ဝယ်သူမပြတ်၊ မြစ်ကမ်းပြင်မှာ၊ ထွက်ဝင်ငြားကေ၊ ပျားပန်းခပ်သို့၊ လှည့်ပတ်လူးလာ၊ ဤရပ်ရွာကား၊ သာယာတင့်တယ်၊ ရခိုင်ပြည်မှာ၊ ကျော်သည်ဂုဏ်ဟိတ်၊ လိုရာစုံကေ၊ ပုံဏ္ဏရိပ်ဟု၊ တံဆိပ်နာမည်၊ တပ်ဝင်းခြံနှင့်၊ ပတ်ရံလစ်ကေ၊ ရွာသစ်တည်ဟု၊ နုမေပျိုလှ၊ သိချင်လိုကေ၊ လူပျိုချောကို၊ ပြောလို့ပြရေ။
Posted by thahlaoo at 4:26 AM No comments: Read Comments
(၃) လဝန်းပေါ်ကေ၊ ထိုရော်ကာလ၊ သိန်းကျော့ဝေနှင့်၊ မငွေလှရို့၊ တူကွမကွာ၊ ဆီးကွမ်းယာကို၊ လှမ်းကာပြီးမြောက်၊ မောင်လူပျိုလေ၊ ထိုနှစ်ယောက်မှာ၊ စားသောက်ပြီးကေ၊ ကြောင်းများဖျင်ကို၊ သိချင်ရီးနှင့်၊ မီးလတ်တေကား၊ ရွှေပြည်အောင်နန်း၊ ကြငှန်းထူကေ၊ ထီးဖြူရွန်းလို့၊ မင်းခဏ်းတန်တန်၊ စည်တော်သံဖြင့်၊ ဆူညံဟိလတ်၊ ဓညခေါ်ကေ၊ မြို့တော်မြတ်ကို၊ ရံပတ်ဝိုင်းကာ၊ နိဂုဏ်းရွာ၏၊ သညာနာမ၊ တွင်ခေါ်ပုံလျှင်၊ ဟူသမျှကို၊ နှမကညာ၊ သိတုံပြန်သော်၊ မကျန်ရယောင်၊ ပြောပြပါဟု၊ ထိုခါကာလ၊ သိန်းကျော့ဝေကေ၊ မေအလှက၊ မောင်လှတင့်တယ်၊ မေပြောဆိုကေ၊ ထိုစကားကို၊ ထောင်နားတည်ပါ၊ ပြန့်ကျယ်စွာလှ၊ ကျွန်းဦးမြီမှာ၊ သပြီခလို့၊ ရောင်မြဝီဝီ၊ အောင်ခြင်းညံ၍၊ အောင်သံကျူးလို့၊ ဇမ္ဗူဒီမှာ၊ သညီဝေါဟာ၊ ထောပနာနှင့်၊ သြဘာသောင်းသောင်း၊ သတင်းပေါ်၍၊ နင်းကျော်ဘိကေ၊ သီရိချောင်းတွင်၊ မင်းကောင်းကြိမ်ဖန်၊ ဗဟိုညံ၍၊ စည်သံရိုက်ဟီး၊ ရွှေနန်းဆောင်ဖြင့်၊ ပြောင်ပြောင်ညီးကေ၊ မြိုကြီးဓညာ၊ အောင်ချာချက်မှာ၊ ဒိသာနောက်ယွန်း၊ ကျီးငှက်သံဖြင့်၊ ညိုးညံညောင်းကေ၊ ဇီးချောင်းကမ်းတွင်၊ ပထွန်းကျက်သရီ၊ လှဆန်းညီကေ၊ အိမ်ခြီများစွာ၊ လီညင်းသွန်၍၊ ပျော်ရန်ကောင်းကေ၊ ဇီးချောင်းရွာက၊ မကွာဝီးမြောက်၊ သံကျော်ကျော်ဖြင့်၊ တခေါ်လောက်တွင်၊ ရှိနောက်တည့်ခါ၊ သီရိမာ၏၊ ဒိသာနောက်ကမ်း၊ နတ်ရို့ရွာနှင့်၊ ပမာညွှန်းကေ၊ ကြောင်းလမ်းဇင်္ခါ၊ ဘယ်နှင့်ညာမှာ၊ သွယ်ကာစီတန်း၊ အဝေယာလေ၊ နော်ဇာပန်းကေ၊ ဒန်းထပ်တရာ၊ ဇီသဝါရို့၊ အခါမလပ်၊ ပွင့်ဟောင်းလွန်၍၊ မုံဟန်ရင့်ကေ၊ ပွင့်သစ်ထပ်လို့၊ ခိုင်ညွတ်ဖြူဝါ၊ ပန်းနံ့ကြိုင်၍၊ ရိပ်မြိုင်ကောင်းကေ၊ ပုန်းချောင်းရွာကို၊ မကြာထုတ်ချောက်၊ မောင်သက်ဝီမှာ၊ လှမ်းချီရောက်က၊ တယောက်နားကာ၊ ထိုသည့်ရွာမှ၊ အရာတဖန်၊ နောက်ရပ်ထံသို့၊ ခေါ်သံတကြား၊ သိချင်လို၍၊ ရှိကိုလားသော်၊ ထူးခြားသာလွန်၊ ဥယျာဉ်ခြံနှင့်၊ သီးနှံမျိုးမျိုး၊ တူးဆွလှန်ကေ၊ ပေါက်ထွန်တိုးလို့၊ စိုက်ပျိုးကြအင်၊ ပွင့်ဖူးဆင်၍၊ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်း၊ ကွင်းပြင်ကျယ်မှာ၊ မြထည်ရွှန်းသို့၊ စိမ်းလမ်းစိုပြေ၊ ကျက်သရေနှင့်၊ တင့်ပေတုံလတ်၊ လုပ်တိုင်းအောင်ကေ၊ ဒေါင်းဒေါင်ရပ်ကို၊ မချွတ်မသွေ၊ မပန်းခင်ပင်၊ မြင်ကာတွိကေ၊ ရောက်လိမ့်မည်လေး။
Posted by thahlaoo at 4:23 AM No comments: Read Comments
(၂) တောင်ကျွန်းမယေဒီပါ၊ မဟီချာမှာ၊ စီကာလှပ၊ မြရိပ်မြိုင်နှင့်၊ တောင်စဉ်ဝိုင်းကေ၊ တိုင်းရက္ခတွင်၊ စန္ဒသုဓမ္မ၊ မည်တွင်ခေါ်၍၊ ဘွဲ့တော်ရကေ၊ မင်းလှဘုန်းကြွယ်၊ နတ်မြို့ဟန်သို့၊ အလွန်ထူးကေ၊ မြောက်ဦးပြည်တွင်၊ ဂုဏ်ရည်မညှိုး၊ လက်ရုံးထောင်ကေ၊ အခေါင်မိုးလို့၊ စိုးသည့်အခါ၊ များစည်းစိမ်နှင့်၊ ပြည့်ညီလတ်ကေ၊ ဘောင်းဒွတ်ရွာက၊ သညာနာမ၊ ပန်းဖြူအောင်နှင့်၊ မောင်ထွန်းမြဟု၊ လှပတင့်တယ်၊ သက်နှစ်ဆယ်ကေ၊ အရွယ်တူမြောက်၊ လုလင်ပျိုလေ၊ ထိုနှစ်ယောက်မှာ၊ ဘုန်းတောက်ပေါ်ထင်၊ မုနိသျှင်ကို၊ ဖူးမြင်လိုလှ၊ တိုင်ပင်ခံကေ၊ အကြံမျှလို့၊ မိဘအထံ၊ လားချင်လိုသည်၊ ထိုအကြောင်းကို၊ ခွင့်တောင်းပန်၍၊ ယင်မြန်ဆွဆွ၊ ဝတ်စားယင်၍၊ ဆင်ပြီးမှလျှင်၊ မိုးထမှုံရီ၊ နှင်းဝီဝီနှင့်၊ စုံလီဖြူးဖြူး၊ တကျော်ကျော်နှင့်၊ ငှက်တော်ကျူးကေ၊ ရက်ဦးမင်္ဂလာ၊ ချိန်အခါတွင်၊ နှစ်ဖြာတူကွ၊ မိမာတာနှင့်၊ ပီတာဖကို၊ ဦးချပြီးသော်၊ ဓညမည်ကေ၊ မြို့ဒေသကို၊ မှန်းဆမျှော်လို့၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး၊ ရွှေဇင်္ခါလေ၊ မဂ္ဂါလမ်းကို၊ လှမ်းလို့လားသော်၊ များပြားလှစွာ၊ ကျေးလက်ရွာကို၊ လွန်ကာကျော်မြောက်၊ ရိပ်မြိုင်မြိုင်နှင့်၊ ဂနိုင်တန်းမှာ၊ စခန်းထောက်လို့၊ ရှိနောက်ဘယ်ညာ၊ ကြည့်သောခါတွင်၊ စီကာညွတ်ပျောင်း၊ များစုံလင်ကေ၊ သစ်ပင်ပေါင်းမှာ၊ ရွက်ဟောင်းလည်းကြွီ၊ ညွန့်ရိုးတံမှာ၊ ပတ်ရံစုကေ၊ ရွက်နုဝီလို့၊ အနီအဝါ၊ ပန်းများစွာလည်း၊ မုံကာပွင့်ဖူး၊ သင်းပျံ့ကြိုင်ကေ၊ ဂနိုင်ဦးမှာ၊ ပျော်မြူးဝဲပျံ၊ ကျီးငှက်သံဖြင့်၊ ညိုးညံချိုမြ၊ တောဂနိုင်လေ၊ မြိုင်အလှကို၊ ဝဝရှုကာ၊ တတောဝင်ကေ၊ တပြင်သန်းလို့၊ လှမ်းလတ်ပါသော်၊ သာယာလှပ၊ ဇီးချောင်းရွာလေ၊ ရပ်ဂါမကို၊ ရောက်ကြတုံလျှက်၊ မြပြိုင်ညောင်နှင့်၊ ကံဘောင်ထက်မှာ၊ တန့်လျှက်တူညီ၊ ထိုင်လို့နီကေ၊ ထိုသည်အခါ၊ သာမောစည်၍၊ ပျော်ဘွယ်ကောင်းကေ၊ ဇီးချောင်းရွာက၊ ကလျာရူပ၊ သိန်းကျော့ဝေနှင့်၊ မငွေလှရို့၊ ယင်ဆွမကြာ၊ ရီကန်သာကို၊ လှမ်းလာဆတ်ဆတ်၊ ညချမ်းနီမှာ၊ သောက်ရီခပ်၍၊ တက်လတ်ကာလ၊ ပန်းဖြူအောင်လေ၊ ပျိုမောင်ထွားမှာ၊ စကားစလို့၊ မြွက်ဟခြင်းရာ၊ မောင်ရို့မှာကေ၊ ပြည်ရွာညွန့်ဖူး၊ ထီးနန်းဆောင်ဖြင့်၊ ထွန်းပြောင်တောက်ကေ၊ မြို့မြောက်ဦးက၊ သုံးလူ့ထိပ်ပန်၊ ကိုယ်စားမွန်ကို၊ ဖူးရန်စိတ်ဟိ၊ ဒေရပ်ရွာကို၊ ရောက်လာဘိလည်း၊ အသိမိတ်ဆွေ၊ မဟိပေကေ၊ နှမအိမ်မှာ၊ တညည့်တာကို၊ တည်းပါစီရန်၊ လှတင့်တယ်လေ၊ ပျိုမေနှောင်းကို၊ မောင်တောင်းပန်ဟု၊ ဆိုပြန်တုံငြား၊ သိန်းကျော့ဝေလေ၊ ပျိုမေကြားက၊ စကားသာယာ၊ မောင်လူပျိုကို၊ နှုတ်ချိုပျားနှင့်၊ ပြောကြားရာကား၊ မဟာမုနိ၊ မြတ်ဘုန်းမိုကို၊ ဖူးလိုဘိ၍၊ ခရီးထွက်ခါ၊ မေရို့ရွာသို့၊ ရောက်လာတုံရ၊ သိမိတ်ဆွေလေ၊ ကေတန္ဒိလျှင်၊ မဟိကြသော်၊ ချမ်းမြရိပ်ငြိမ်၊ မေရို့အိမ်မှာ၊ တည်းမှီဖို့ရာ၊ ယခုပင်လျှင်၊ မှန်စင်စစ်ကေ၊ လိုက်လတ်ပါဟု၊ ခေါ်ကာသူထ၊ တူမကွာဘဲ၊ လိုက်လာကြသော်၊ မွီးဖမိခင်၊ ဝီးကပင်လျှင်၊ ရှုမြင်တုံငြား၊ သားပမာကေ၊ မိတ္တာပွား၍၊ သနားတုံပြီး၊ ကြောင်းထိုထိုကို၊ သိလိုခြင်းနှင့်၊ သတင်းမီးလို့၊ သိပြီးတုံမြောက်၊ ရွယ်နုပျိုကေ၊ ထိုနှစ်ယောက်အား၊ စားသောက်စရာ၊ ဟင်းမိစ္ဆာနှင့်၊ ညစာထမင်း၊ မေလျှင်နီကေ၊ အိမ်အတွင်းမှာ၊ တည်ခင်းပြီးသော်၊ ရှိပြုပ္ပါလေ၊ ဥဒေစွန်းက၊ လဝန်းပေါ်ရေ။
Posted by thahlaoo at 4:15 AM No comments: Read Comments
ဓညဝတီနိဂုံးရွာများသမိုင်းသာခြင်း (အစ/အဆုံး) (စုစုပေါင်း အပိုဒ် (၃၁) ပိုဒ်)
မြောက်ဦးမြို့ ကျောက်ရစ်ကေဆရာ မောင်စံလှ စပ်ဆိုသည်။ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၁၁၆)၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၇၅၄) ခုနှစ် ရွီးကူးပီမူ(၁) အောင်ကြောင်းမယေမင်္ဂလံ၊ အောင်ဆုပန်ကေ၊ အောင်သံညောင်းညောင်း၊ အောင်ပါစီဟု၊ ညောင်ရီလောင်းလို့၊ ဆုတောင်းပဌနာ၊ အဖန်ဖန်လေ၊ မှန်ယ္ခုလျှင်၊ ပြုပြီးခါဝယ်၊ မြတ်စွာဗုဒ္ဓ၊ အတုလံကေ၊ သမ္ဗုဒ္ဓနှင့်၊ ဓမ္မသံဃာ၊ မြတ်ဆရာလေ၊ မာတာပီတ၊ ဂုဏ်ကဲလွန်ကေ၊ အနန္ဒကို၊ ကာယဝဇီ၊ မနောချီကေ၊ သုံးလီဒွါရ၊ ကံသုံးဖြာလေ၊ ပဏာမဖြင့်၊ ညွတ်ခရိုကျိုး၊ လက်ဆယ်ဖြာကို၊ ထိပ်မှာမိုးလို့၊ ရှိခိုးဦးချ၊ ကြိမ်ဖန်ဖန်ဖြင့်၊ ကျွန်ယ္ခုကေ၊ ပြုပြီးမှလျှင်၊ သူရဿတီ၊ လှဆင်းညီကေ၊ ဒေဝီရတနာ၊ ကျွန်ုပ်မှာတွင်၊ တည်ပါစီကြောင်း၊ အဓိဌာန်နှင့်၊ ဆုမွန်တောင်းမှ၊ ရှိဟောင်းပီစာ၊ ကျမ်းအလာကို၊ ယူကာညှိနှိုင်း၊ မြို့ဓညာကို၊ ပတ်ခါဝိုင်းသည်၊ သမိုင်းစဉ်လာ၊ နိဂုဏ်းရွာကို၊ ပြရာအခဏ်း၊ နောက်တဖြာ၌၊ ထပ်ခါညွှန်းသော်၊ ရွှေနန်းတည်ရာ၊ မြို့ဓညာဝယ်၊ စန္ဒာသူရိယ၊ ဘုန်းတောက်ထိန်ကေ၊ ရာဇိန္ဒနှင့်၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၊ ဘဂဝါရို့၊ မဟာမုနိ၊ ခြောက်သွယ်ရောင်ဖြင့်၊ ပြောင်ပြောင်ညီး၍၊ သောင်းထီးကျော်လှန်း၊ မြတ်ဘုန်းမော်လေ၊ ကိုယ်တော်ရုပ်ကို၊ သွန်းလုပ်ခန်းနှင့်၊ မြို့နန်းဖြာဖြာ၊ တည်ထောင်ရာတွင်၊ ရှည်ကြာသက်တမ်း၊ အတန်တန်ကို၊ ကာရန်ဆန်းနှင့်၊ ညွှန်းကာခုဝယ်၊ နောက်နောင်လာကို၊ သိပါရအောင်၊ ပြလိုက်မည်လေး။
Posted by thahlaoo at 4:06 AM No comments: Read Comments
အိမ်ကပီးစပ်ပါသောကြောင့် --။ ။
Posted by thahlaoo at 3:45 AM No comments: Read Comments
သင့်ကိုသူများ စားလိမ့်မည် --။
Posted by thahlaoo at 10:18 AM No comments: Read Comments
(---------) သားတွေ --။
Posted by thahlaoo at 3:39 AM No comments: Read Comments
သေမင်းရဲ့ အေးစက်တဲ့ လက်ချောင်းများစွာတို့
သော့မဲ့သင့်တခါးကို လာခေါက်နေတယ် --။
မှောင်မဲည အကာလ သန်ခေါင်ယံမှာ
နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့တော့ --။
ကကြိုးစုံစွာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီ --။
ကန္တာရ အလယ်က ငှက်ငယ်တကောင်လို
ဘ၀ရဲ့အဓိပ္ပါယ် တွေ့ပါလေစ --။
ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်တွေ သက်သာသွားပေါ့ …။
သတိလည်း လစ်ခဲ့ပြီပေါ့ --။
(မရေမရာ) ရေတိမ်နစ်သွားရှာပြီ --။
လွမ်းဖွယ်ပြောကျယ်တဲ့ သွေးသမုဒ္ဒရာ လှိုင်းတံပိုးတွေပေါ်မှာ
မိစ္ဆာကောင်တွေရဲ့ ရွံရှာဖွယ် သမိုင်းအမည်းစက်
အထီးကျန် သံဝေဂ ကန္တာရငှက်ခါး
ထာဝရ အိပ်စက်သွားခဲ့ပြီ --။
သေသူရဲ့ ဂုဏ်ထူးဝိသေသ ပကာသန မာန
ခပ်သုတ်သုတ် ပျံသန်းသွားကြ --။
တောင်ဖက် အရပ်သို့ လှည့်ပျံသွားကြ ---။
ရွာသို့ ပြန်လာခဲ့ကြ --။
ဇရာ မရဏ မြစ်ရေစီးကြမ်း
ရှင်ပြန် ထမြောက်လာနိုင်အုံးမလား --။
October 16, 1998, သောက်ကြာနိ ရွီးစပ်သည်။
THE FUNERAL NIGHT OF THE GHOST OF POWER
The silent night was in sarcastic smile greeting him.
A black owl had come out for the preys.
The chill hand of death was knocking at the door.
“Sacrifice all your belonging”
“Try not to turn back your broken wheels”
Tears falling down on the cheeks, he stubbornly denied
To obey the call of Death in the dark midnight.
An twilight picture ofadream has faded,
Andayellowish leaf of summer had fallen down,
And the dead body on the pedestal of intoxicated power
Could no more appreciate the crying sounds.
During the summer, hot asaflame,
Forward to move was the lonely traveler.
Tired in agony ofadesert-bird onaleafless tree,
Woe burning in his heart, he was alone in the wild.
No more proud in pain, the desert-bird could not know
Where to fly and where to perch.
Perhaps as the wings got tired,
He slept among the fallen leaves.
In the worldly drama, likeaclue-puzzled labyrinth,
He had played in all acts.
Bitter hate, charming words, sweet fragrance,
And withabunch of suffering,
His feet were hesitating to move on.
Searching foranew pasture, he has wandered along,
And in thirst for beauty, he felt not the taste.
Gulping downacup of wine,
His head bowed with the craving wealth,
And in the world of less compassion,
Injured by grievances,
He has passed thousand sleepless nights.
With the staggering steps on way back home,
He sang aloud and had fallen unconscious.
Struggling, swimming and drowning,
In the shallow streams of life,
Suffering thousands the wounds of Sin,
He had become mad.
The snake charmer looking for the sermon of Brahmansor,
In mirage sight, has lost his way,
And was wandering aimlessly on the dense jungle roads.
With the middle-path foot-steps,
Like haunted the blind by the ghosts,
He could not move onward,
Thus, has committed the crimes again and again.
A young nude girl though sobbing in murmuring breath,
Tears flowing down and kneeling before him,
She has been drowned
Behind the disgusting curtains of the dark walls,
Oh, Young blossom! Plucked by the bullets of Beasts,
Are you floating on the waves of the broad bloody ocean?
Oh, young deer! Escape not and moaning sounds in echo,
Have you fallen into the traps of the hunters?
“We have to pay the blood-credit
To the historic black scar of the despised ghost.”
Beneath the bosom-blood of the people,
The fearful dragon no more be poisonous thanawater snake,
And the hot power of the flames has broken its spears.
The tiger in cage could not jump over the preys,
Then, you should sleep in jocund death,
Enjoying Sabbath and Sermon.
The toll from the temples, the sounds of the cow-bells
From nearer the slope, have ceased all then,
And in solitude, the regretful desert-bird has fallen
Sound sleep on the earthen bed forever.
Washing off the honour, pride and prejudice
Of the dead person,
And chattering in praise of his name,
The people on the horse-pulled loading carts,
Have come back along the red muddy road.
A flock of birds has swiftly flown away
To the remote hill-ranges.
From the old golden jungle road,
Came back the cattle to the village.
From above the cemetery house,
The long-necked vultures had flown away to the south.
Beneath the rough flow of (Old-age and Death) river,
Beside the wild bank of Sorrow and Woe,
Stirred and blown by the waves of Misery,
Would the hyacinth amid the whirls of Ever-circle,
The chariot of time on its thorny way,
Has voyaged slowly greeting the world.
Under the midnight sky, from the cemetery hill,
The last toll of farewell has spread over
Khaing Kyaw Kyaw (AASYC)
Posted by thahlaoo at 12:21 AM No comments: Read Comments
ဓညဝတီနိဂုံးရွာများသမိုင်းသာခြင်း (အစ/အဆုံး) (စုစုေ...